Yiyiphi iNqanaba eliLawulayo kwiGalofu?
Xa ufuna i-Quicker, Umdlalo olula
Ikhosi "yolawulo" okanye "ikhosi yolawulo lwegalufa" yinkambo e mfutshane kuneklasi yegalufa elilodwa okanye kwiindawo ezininzi. Unomlinganiselo ophantsi ngenxa yokuba ngokuqhelekileyo kubandakanywa izimbobo ezingaphezulu kwe -3 kunokuba zifunyenwe kwiklasi yegalufa.
Nangona iikhosi ezilawulayo ziqulethe izibonda ezingaphezu kwe-3-kwaye zinokuthi zenziwe ngokubanzi nge-3-zingaphinde zibandakanye enye okanye ngaphezulu kwemigodi engama-4 kwaye ngamanye amaxesha kwimizuzu engama-5 .
Ikhosi engama-18 engamagosa ephetheyo ngokuqhelekileyo ukusuka naphakathi kwe-54 ukuya kwi-65.
Ikhosi yegalufu yokulawula ingaba yinto yokusebenza, kodwa ezininzi zazo ziyinxalenye yeeklasi ezinkulu zegalufu okanye izibonelelo. Zibandakanya njengezikhawulezileyo, ezikhethiweyo ezilula kuneenkqubo zolawulo ezibandakanyiweyo kwiqela okanye kwisiza. Enye indawo i-golfers ifumana abaphathi njengenxalenye yesibonelelo sokuhamba kunye nebala lokuqhuba . Olu hlobo lwekhosi lubizwa ngezinye i-Executive 9 okanye iSigqeba 18.
Iikhosi ezimfutshane ziThetha ixesha elifutshane
Kukho konke malunga nexesha. Cinga njengezwi elithethileyo, "Ndiyifutshane ngexesha leMgqibelo, ngoko-ke masidlale ikhosi yesigqeba esikhundleni sekhosi."
Iikholeji zeGalufu eziGqeba ziba yimingxuma elithoba okanye iingxobo ezili-18 ubude. Ziye zenzelwe ukubonelela ngokukhawuleza kwamava okugaluza ngokumalunga nexesha elifunekayo ukugqiba i-18-hole hole. Umngciphe omncinci ubude unciphisa ixesha elifunekayo ukugqiba, kwaye ukuba le khosi inemibhobho engama-9, kuya kubonakala ukuba kuthathe ixesha elide lokudlala xa lifaniswa ne-18-holer.
Ngenxa yokuba ininzi yezimbobo zifutshane, iikhosi zezigqeba zizinto ezifanelekileyo zokukhetha iiglasi zegalufa, abaqalayo okanye nabani na othanda igorfu kodwa bahlangabezana nobude-okanye ixesha elifunekayo-kwiklasi yegalufa eliqhelekileyo.
"IsiGqeba" kwiSifundo seMigangatho "I-Par-3"
Ngaba iikhosi eziphambili kunye nezifundo ze- par-3 into efanayo?
Ziyakwazi ukuba, kodwa "inkqubo yokulawula" ininzi yegama elibandakanya. Njengoko igama layo lithetha, ikhosi ye-par-3 ibandakanya kuphela izibonda ezi-3, kodwa ikhosi ephezulu ingaba yi-par-3s okanye ingaquka ezinye izimbobo.
Kufana nentshukumo endala: Zonke i-poodle ziyizinja, kodwa akuzona zonke izinja ezi-poodle. Zonke iikhosi ze-3 ziyakucingelwa ukuba ziyi-"yolawulo oluqhubekileyo" olusekwe, kodwa akukho zonke iikhosi zezigqeba zezifundo ze-par-3.
Cinga ngeikhosi ze-3, iikhosi ezimfutshane, kunye nezifundo ze-pitch-and-putt njengesiqendu sesifundo segalufa.
Kutheni Zibizwa ngokuba yiziGqeba eziLawulayo?
Igama elithi "ikomiti elilawulayo" livela kwilizwe lezoshishino. Ukuba abantu abashishini-kunye nabaphathi bezentengiselwano-bafuna ukungena ngokukhawuleza kwintlanu ngaphambi okanye emva komsebenzi okanye mhlawumbi baze batyelele kwiklasi yegalufa ngexesha lesidlo sasemini, iingxaki zokwenza ezi ngempumelelo ziphakamileyo kwixesha elifutshane elithatha ixesha elifutshane ukudlala.
Igama lezi ntlobo zegalufu zivela kuloo ngcamango. Iikholeji ze-executive do not only popular with beginners, abasebenzisi abaphezulu, abancinci nabadala, kodwa nabo bayathandwa ngabagaluli abafuna ukungena emigodini emva komsebenzi kwaye bafumane ixesha ngaphambi kokuba ilanga lihla.
Amaziko amane okugqibela: 2013 - 2017
5 Iimpawu zokunqoba kwiTablejack Blackjack
Ngaba iAsh ngoLwesithathu?
Umthi wemvula yegolide kunye noFlamegold
I-Aspen Tree - Umthi oNinzi oqhelekileyo kwi-North America
UThomas Jennings, uMninimzi wokuqala we-African-American Patent Holder